Michael Bolton ၏ Big Sexy Valentine's Day သည် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် - Netflix မူရင်း
Michael Bolton S Big Sexy Valentine S Day Special Is Netflix Its Best
Michael Bolton ၏ Big Sexy Valentine Day အထူးဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံ - Brandon Hickman / Netflix
အံ့’s ခြင်းရဲ့သံလက်သီး: ငါတို့ရာသီ 1 အကြောင်းကိုသိအရာအားလုံး လိမ္မော်ရောင်သည် New Black ရာသီ ၅ ရက်ဖြန့်ချိသည့်နေ့ရက်စွဲဖြစ်သည်
Michael Bolton ရဲ့ Big Sexy ချစ်သူများနေ့ရဲ့အထူးအထူးယခု Netflix ကိုအပေါ်စီးဆင်းနေသည်, ထိုသို့ Netflix ဟာအစဉ်အဆက်လုပ်သောအကောင်းဆုံးဟာသတစ်ခုဖြစ်သည်!
Netflix ကပဲ Valentine's Day အတွက်ကြည့်ရှုသူများအားအံ့အားသင့်စေခဲ့သည် မိုက်ကယ် Bolton ရဲ့ Big Sexy ချစ်သူများနေ့ရဲ့အထူး! အထူးဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့တွင် Netflix တွင်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Netflix တွင်လုပ်ခဲ့သမျှအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အထူးခုနှစ်တွင်မိုက်ကယ်ဘော်လ်တန် Santa Claus ထံမှအပူတပြင်းအသနားခံရရှိသွားတဲ့: လူတွေကိုခရစ္စမတ်အားဖြင့်တစ်နည်းနည်းနဲ့ခရစ္စမတ်ကယ်တင်လိမ့်မည်ဟုခရစ္စမတ်အားဖြင့်ကလေးများတစည်းရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ချစ်သူများနေ့၏နေ့၌ကမ္ဘာကြီးကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကူညီပါ။ ဒါကြောင့် Bolton ကလူတွေကိုကလေးမွေးဖို့ကူညီပေးဖို့အသင့်တော်ဆုံးအရောင်အသွေးစုံတဲ့အဝတ်အစားကိုဝတ်ပေးတယ်။ သူသည်ဘောလ်တန်နှင့်အတူ Variety အထူးအတွက်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သောနာမည်ကြီး guests ည့်သည်အချို့နှင့်ပူးပေါင်းသည်။
Netflix ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Bolton ကို Andy Samberg၊ Sarah Silverman၊ Fred Armisen, Maya Rudolph, Casey Wilson, Chris Parnell, Eric Andre, Jorma Taccone, Michael Sheen နဲ့ Randall Park တို့ကအထူးပူးပေါင်းမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Akiva Schaffer နှင့် Scott Aukerman တို့က Netflix အတွက်အထူး sexy special ကိုညွှန်ကြားခဲ့သည်။
ဆက်စပ်: Netflix ၏မူရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Netflix မူလမူရင်းသတင်းစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။
ငါတောင်မှနောက်နေမဟုတ်ပါဘူး မိုက်ကယ်ဘော်လ်တန်ရဲ့ Big Sexy ချစ်သူများနေ့ရဲ့နေ့အထူး ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် Netflix ဟာဟာသဘက်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးအရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဒါဟာလက်ျာဘက်တက်အတူပါပဲ မပျက်စီးနိုင်သော Kimmy Schmidt, နှင့်အထူးဖြစ်ကောင်းပိုပြီးလေပြင်းတိုက်ခြင်း -busting ပြုံးရယ်ရှိပါတယ်။
Netflix သည်ဤကဲ့သို့သောအရာများစွာကိုပြုလုပ်ရန်သူတို့၏ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ် ပို၍ နှစ်သက်သည်။ ၎င်းသည်ကေဘယ်လ်သို့မဟုတ်ကွန်ယက်တီဗွီအတွက်အလွန်အမင်းနယ်ပယ်လွန်းသော်လည်း၎င်းအတွက်စျေးကွက်တစ်ခုကျိန်းသေရှိသည်။ သင် Lonely Island ကိုနှစ်သက်လျှင် Netflix တွင်ယခုကြည့်ရှုသင့်သည်!
ဖတ်ရမည်Netflix တွင်အကောင်းဆုံးအချစ်ဇာတ်လမ်း ၅၀
ငါအထူးနှင့်အတူရှိသည်တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာကတစ်နာရီထက်လျော့နည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါဒီအပြည့်အဝရာသီ, ဒါမှမဟုတ်ပင်မျိုးစုံရာသီစောင့်ကြည့်နိုင်ဘူး။ Michael Bolton ပိုများလေ၊
မိုက်ကယ်ဘော်လ်တန်ရဲ့အထူးအသစ်ကျိန်းသေ Netflix နှင့်အကောင်းဆုံး 50 Romantic ရုပ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအသွင်အပြင်အောင်လိမ့်မည် Netflix မှအကောင်းဆုံးဟာသရုပ်ရှင် ၅၀ ။
ဘယ်အချိန်မှာရာသီ6ထွက်ခွာရမလဲဆိုတာကိုရာသီအလိုက် netflix ကိုဘယ်တော့စမလဲ
အမေရိကန်ထိတ်လန့်ဇာတ်လမ်း netflix လွှတ်ပေးရန်
မီးခိုးရောင်ရဲ့ခန္ဓာဗေဒ၏ရာသီ 13 Netflix အပေါ်လာမယ့်အခါ
ရာသီ 1 ဇာတ်လမ်းတွဲ 10 အဘယ်ကြောင့် 13 အကြောင်းပြချက်